अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, २२ चैत २०७७)
कम्पनीको शेयर मूल्य लगातार चार दिनदेखि वृद्धि हुँदै आएको छ । बिहीबार पनि कम्पनीको शेयर मूल्य ९ दशमलव ९१ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रु. १०३१ पुगेको छ । कम्पनीले ५० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव गरेर साधारणसभा आयोजना गरेसँगै शेयर मूल्य बढेको हो ।
हकप्रदका कारण कम्पनीको शेयर मूल्य चार दिनमा २५५ रुपैयाँले वृद्धि भएको हो । चैत १६ गते प्रतिकित्ता रु. ७७६ रहेकोमा बिहीबार प्रतिकित्ता रु. १०३१ पुगेको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी रु. १ अर्ब रहेको छ । कम्पनीले चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा रु. ४ करोड ६ लाख नाफा कमाएको हो । कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रु. ८ दशमलव १३ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रु. ११५ दशमलव ६४ रहेको छ ।
कम्पनीको ६१ दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा सेतो मारुबोजू बनेको छ । यस्तो आकृतिले बजारमा कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दो प्रवृत्तिमा रहेको संकेत गर्छ । पछिल्लो तीन दिनको प्रवृति हेर्दा ‘थ्री ह्वाइट सोल्डर’ बनेको छ । आरएसआई ओभरबौज्ट जोन ८५ दशमलव ९४ बिन्दुमा छ ।
यसले शेयर खरिद चाप बढिरहेको देखाउँछ । कम्पनीको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ११५ दशमलव शून्य १ बिन्दुमा छ । उतारचढाव उच्च रहेको देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा जोखिम बढी हुन्छ भने प्रतिफल पनि बढी हुने गर्दछ ।
त्यस्तै, कम्पनीको मुभिङ एभरेज २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कामा टाढिएका छन् । हालको मूल्यरेखा यी दुवै मूल्यरेखाभन्दा माथि छ ।
बिहीबारको शेयर मूल्य रु. १ हजार ३१ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य सस्तिए रु. ८१५ मा टेवा पाउने देखिन्छ । कम्पनीको यस दिनको शेयर मूल्य ६१ दिनयताकै उच्च हो ।